उपभोक्तालाई झुक्याउँदै प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना गोल्यान समूहको माटो ब्राण्ड – EKalopati
२६ पुष २०७७, आईतवार २२:२३
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा अर्गानिक तरकारी तथा फलफूलका नाममा उपभोक्ताहरुलाई झुक्याएर चर्को मूल्य असुल्ने काम कृषि व्यवसायीहरुले गर्दै आईरहेको छन् । केही वर्ष अघिसम्म शनिबार एक दिन तारा गाउँ ह्यात, नयाँ बानेश्वर लगायतका केही ठाउँमा तरकारी तथा फलफूल अर्गानिकका नाममा विक्री वितरण हुँदै आईरहेको थियो ।
तर, त्यहाँ विक्री वितरण गरिने तरकारी अर्गानिक नभएको र अर्गानिकका नाममा उपभोक्तालाई ठगि गरिरहेको भन्ने समाचार प्रकाशन भए पछि त्यस्ता विक्री केन्द्रहरु वन्द भएका थिए ।
अहिले फेरि उही रुपमा व्यवसायीक घराना समूह गोल्यान समूह पनि अर्गानिक तरकारी तथा फलफूलका नाममा उपभोक्तालाई झुक्याउँदै आईरहेको खुल्न आएको छ । पवन गोल्या अध्यक्ष रहेको गोल्यान ग्रुपले कोभिड– १९ को मौका छोपेर माटो ब्राण्डका नाममा सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी तथा फलफूल विक्री पूर्ण रुपमा अर्गानिक नभएको कृषि विज्ञहरुले बताएका छन्
गोल्यान समूह जस्तो प्रतिष्ठिट व्यवसायिक घरानाको नामबाट माटो ब्राण्ड स्थापना गरी अर्गानिक कृषि बस्तुका नाममा कृषि उपज बजारमा विक्री वितरण भईरहँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्तासँग सम्वन्धित संघसंस्था एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मौन बसिरहेको देखिन्छ ।
विना परीक्षण गोल्यान समूहले माटो ब्राण्डलाई अर्गानिक नाम दिएर उपभोक्ताहरुलई झुक्याउने काम गरिरहेका छ । यस तर्फ सरोकारवालाको ध्यान कहिले पुग्ने हो ? कि मिलेमतोमा नै सामसुम हुने हो ?
ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिले ल्याएको राजनैतिक हलचल